↑ တင်နိုင်တိုး (ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၁၃). ပါလီမန်ခေတ် ထင်ပေါ်ကျော်ကြား မြန်မာအမျိုးသမီးများ. မဇ္ဈိမစာပေ, ၅၈။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စန္ဒာ_(ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)&oldid=440482" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၈:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။